Coronavirus ဆိုတာလူ့ဘောင်ကိုခိုင်မာစေတယ်၊ : Martin Vrijland
အဆိုပါ coronavirus ပုံလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားသောတင်းကျပ်တတ်၏။ လူမှုရေးမီဒီယာကိုတိုက်ခိုက်မှုအားလုံးမှာမတူညီတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုတဲ့လူတိုင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။ အမှားမလုပ်ပါနဲ့ ငါရေးခဲ့ပြီးသော ၇ နှစ်တာကာလအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သူမ၏ကီးဘုတ်ကျည်ဆန်များကိုပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အရပ်သားစစ်သားအရေအတွက်သည်ရိုင်ဖယ်ဖြင့်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောစစ်သားအရေအတွက်ထက်များကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်သင်၏မိတ်ဆွေများစာရင်းတွင်သာရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်များစွာမတတ်နိုင်သောအရိပ်မည်းလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်၊ သို့သော်အလွန်ကောင်းစွာအဆင်ပြေသွားပြီးယခုသူတို့၏ကီးဘုတ်နောက်ကွယ်တွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကပြည်နယ်ကနေတိတ်တဆိတ်ရှိပါသလား အကျိုးခံစားခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဝါကျလျှော့ချခြင်း။
ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ကိုသင်ဖတ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အဖြစ်မှန်သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်လူအများအတွက်အခက်တွေ့စေပြီး၊ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ နိုင်ငံတော်မှငွေပေးချေရန်အသုံးချနေသောဤလူအမြောက်အများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိမြင်လာသည်နှင့်အမျှအဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိမြင်လာသည်။ ယခုထွက်လှိမ့်လျက်ရှိသည်သော technocratic ကွန်မြူနစ်ပြည်နယ်အတွက်။ ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံလက်အောက်ရှိ GDR တွင်ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလဲခြင်းမတိုင်မီအရပ်သား ၅၀ တွင် ၁ ဦး သည် Inoffizielle Mitarbeiter (IMB) ဖြစ်သည်။ တကယ်အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်ဟာဖုန်ထူပြားထဲကိုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့သင်အမှန်တကယ်ထင်သလား။ သင့်ပတ်လည်မှာကောင်းကောင်းကြည့်ပါ
Coronavirus အကျပ်အတည်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလူတိုင်းသတိပြုမိကြသည်။ လစာငွေကိုယူရန်၊ လိုအပ်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်နှင့်အခွန်ပြန်ပို့ခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ရန်အတွက်ပြည်နယ်တွင်တစ်ချိန်ကဘီလီယံနှင့်ချီ။ ရရှိနိုင်ပါသလား။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ နှစ်ပေါင်းများစွာခြိုးခြံခြွေတာမှုများကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပြီးယခု tap ကိုရုတ်တရက်လုံးဝဖွင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံ ၀ င်ငွေ (ကွန်မြူနစ်ဝါဒလက်အောက်တွင်) စတင်ခြင်းကိုတိတ်တဆိတ်သက်သေခံသည်။ Inoffizieller Mitarbeiter မှအချိန်ကြာမြင့်စွာလျှို့ဝှက်စွာခံစားခဲ့ရသောအခြေခံဝင်ငွေ။
ထိုမမျှော်လင့်ဘဲရက်ရက်ရောရောပေးသောနိုင်ငံတော်အကူအညီသည်ယူရို ၇၅၀ ဘီလီယံအိုးမှရရှိသည် ECB ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခဲ့သည်t ရှိတယ်။ သို့သော်နောက်ထပ်အိုးတလုံးရှိသည်။
4 ၏လေးပုံတပုံ 2019 ပြီးနောက်ပင်စင်အရင်းအနှီးအတွက်ယူရို 1560 ဘီလီယံပင်စင်ရန်ပုံငွေများမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြီးမားဆုံးပင်စင်ရန်ပုံငွေများတွင် ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds၊ PM de de Bouwnijverheid) တို့ဖြစ်သည်။ အတူတူသူတို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိခဲ့ပါတယ် 909 ဘီလီယံအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတည်ငွေရင်း။ အမ်စတာဒမ်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်အများဆုံးကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုပင်စင်ရန်ပုံငွေများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဤပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုဤ Corona အကြပ်အတည်းအတွင်းစတော့ဈေးကွက်များထိုးကျသွားခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤထိုးနှက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလာမယ့်ခဲ့ကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြသည် ဤဆောင်းပါးတွင်.
ယခုအခါမီဒီယာများကယခုအချိန်တွင်နှင့်အနာဂတ်တွင်၎င်းတို့ပါဝင်သူများအားကတိပြုထားသောပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များအားဖြည့်ဆည်းရန်အိမ်တွင်အရင်းအနှီးများလုံလောက်စွာမရှိတော့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၉ ရက်အတွင်းပျမ်းမျှရန်ပုံငွေအချိုးသည် ၁၀၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။ Trouw အစီရင်ခံခဲ့သည် ပြီးသားမတ်လ2ရက်နေ့တွင်) ။ ဆိုလိုသည်မှာသတ်မှတ်ထားသောပင်စင်ယူရိုတိုင်းအတွက်ငွေ ၉၅ ဆင့်ရှိသည်။ ECB သည် QE အထောက်အပံ့အစီအစဉ်များ (Quantative ဖြေလျှော့ပေးခြင်း) ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးနေသည်။ ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကိုအစဉ်အဆက်မြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်တွင်အတိုးလုံးဝနီးပါးမရှိသောချေးယူနိုင်သောကြောင့်ဗဟိုဘဏ်ကထိုကြွေးမြီကိုပြန်ဝယ်ခဲ့သည်။ သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကရှယ်ယာဝယ်ယူ, ထိုပိုက်ဆံစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အဆင့်၌ရှိနေပါ ဦး မည်။
ယခုဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသည်ဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ဖြန့်ဖြူးနေသည် (ECB မှလာသည်)၊ ဤငွေသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အစားအစာနှင့်အချိုရည်များကိုချက်ချင်း ၀ ယ်မည့်သူများအားထောက်ပံ့မှုအဖြစ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သောင်းဂဏန်းဘီလီယံပေါင်းများစွာကို QE အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်ပြီး၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အလွှာတွင်ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေပါက၎င်းသည်စစ်မှန်သောဘဝရှိငွေကြေးတန်ဖိုးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သောင်းနှင့်ချီသောသန်းပေါင်းများစွာကိုညှစ်။ လူတို့အားပေးလျှင်၎င်းသည်အလွန်အကျွံငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကတိပေးထားသည့်အထောက်အပံ့သည်လူအများအတွက်သက်သာရာရနိုင်ပြီးအချို့သည်အားလပ်ရက်အိမ်၌ထိုင်နေသည်ကိုခံစားရသော်လည်းဆိုလိုသည်မှာ ၁ ပတ်အကြာတွင်ပျော်စရာမဟုတ်တော့ပါ။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကျရောက်သောအခါအခြားကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖြည့်ရန်နှင့်ပါးစပ်ကိုကျွေးရန်ရုတ်တရက်ခက်ခဲလာသည်။
ပင်စင်ရန်ပုံငွေကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းတာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်မအံ့သြပါဘူး။ စင်စစ်ပင်စင်ရန်ပုံငွေများသည်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ (အကြွေးအာမခံ) များထပ်မံရှိနေပြီးအစိုးရအနေဖြင့် ECB ထံမှငွေကိုလက်ခံရရှိလျှင်နောက်တဖန်အဖိုးတန်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအပြောင်းအလဲမြန်တဲ့အကြိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (ဒီဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်) ဆီသို့ကူးပြောင်းသွားတာပါ။ ဦး စားပေးဗဟို။ အရင်ကငါတို့သိခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လူတိုင်းသည်အခြေခံဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္systemာရေးစနစ်ပြန်လည်စတင်ပြီးသောအခါ၎င်းအခြေခံသို့ ၀ င်ငွေကိုသာအာမခံနိုင်သည်။ US မှာ Donald Trump ကနယ်သာလန်မှာလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးအလားတူအစီအမံတွေမနေ့ကကြေငြာခဲ့တယ်။ ဒါကနံရံပေါ်မှာအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်အလွန်အကျွံငွေဖောင်းပွမှုကြောင့်ဤဝင်ငွေကိုချက်ချင်းအသုံးမ ၀ င်ဘဲအခြေခံ ၀ င်ငွေကိုအာမခံလိုလျှင်၊ ပုံနှိပ်ထားသောငွေများ၏ကြီးမားသောကြွေးမြီတောင်ကိုသင်ဖျက်သိမ်းသင့်သည်။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေများသည်ဒတ်ခ်ျပြည်နယ်၏ကြွေးမြီအာမခံအမြောက်အမြားကိုင်ဆောင်ထားသူများအနေနှင့်ထိုရန်ပုံငွေများမှမှားယွင်းသောအရင်းအနှီးသည်ပြီးဆုံးသွားသည်။
အခုတော့ကြွေးမြီတွေအားလုံးကိုဒီလောက်အကြီးအကျယ်ပယ်ဖျက်ပစ်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်ကိုင်တွယ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္financialာရေးစနစ်ဆီသို့ ဦး တည်နေသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းမှအမိန့်အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုပရမ်းပတာကြီးမားတဲ့ရမယ့်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံမှပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုသိမ်းယူခြင်းကို ဦး စွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းခြင်းသည်ပန်းသီးတစ်လုံးနှင့်ဥတစ်လုံးအတွက်ပုံနှိပ်ထားသောငွေများကို ၀ ယ်ယူရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်၏ဘဏ္inာရေးစာရင်းတွင်ဘီလီယံရာအနည်းငယ်မျှပိုမိုမြင့်မားပြီးသင်ပိုမိုပေးဆပ်နိုင်သည်။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအတိုချုပ်ပြောရန်: hyperinflation သည်နောက်ဆုံးတွင်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဆာငတ်နေသည်
ငါသီတင်းနှစ်ပတ်ခန့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် alibi များထုတ်လုပ်ရန်အလျား ၁.၅ မီတာအကွာအဝေးကိုမစောင့်နိုင်သည့်အလွဲသုံးစားပြုသူများ (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) နှင့်သူတို့၏ဗွီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးသည့်မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများကကျွန်ုပ်တို့၌နေဆဲဖြစ်သည်။ coronavirus သည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်လက်ထဲမှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်နှင့်စပိန်နိုင်ငံများထက်ပိုမိုခက်ခဲသောသော့ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသို့သွားရန်လိုအပ်သည်.
ဒါကခက်ခဲသော့ခတ်ထို့ကြောင့်မလွှဲမရှောင်ထုမှရောင်းချသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လည်း၎င်းကိုပြောလိမ့်မည် coronavirus mutates ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးဟာပိုပြီးအန္တရာယ်များလာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီကသူနဲ့သူမလူကိုကြောက်လာပြီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်မင်းကိုသေစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာငါတို့သွားမှာပါ။ ထို့ကြောင့်လွတ်လပ်စွာလှည့်လည်သွားလာသူမည်သူမဆိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်သမားဖြစ်လာနိုင်သည်။
လက်လီအရောင်းဆိုင်အချို့၏ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာများတွင်ချွတ်ယွင်းနေသည့်အခြေအနေကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ATM စက်များသည် (အလွန်ကူးစက်လွယ်သောကူးစက်ရောဂါမှကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်) ကြောင့်ငွေပေးရန်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ Rutte ၏အခြေခံ ၀ င်ငွေသည်သင့်အားတစ်ပတ်လျှင် ၁ ပေါင်နှင့်အာလူးအိတ်တစ်လုံးသာရရှိသောကြောင့်အလွန်အမင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ လူတွေကဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကထွက်လာတယ်။ ထို့နောက်သူတို့၏အိမ်နီးချင်းများကသတင်းပို့ကြလိမ့်မည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Corona အချိန်ဗုံး ticking ဖြစ်နိုင်သောလမ်းလျှောက်သူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့သိထားသူတိုင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့စစ်တပ်က ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရမယ်၊ လူအများပျောက်ကွယ်သွားတာကိုငါတို့မြင်ရလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ယုတ္တိရှိသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ငါအမြဲမျှော်လင့်ခဲ့ကြသောဥရောပရှိပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ပရမ်းပတာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအရာတွေကိုစနစ်တကျစီစဉ်ဖို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအသစ်ရှိတယ်။ ငါဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် နှစ်ပေါင်းကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသည်။ ၎င်းသည် master script အားလုံးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ် master book ကိုထိုစာအုပ်တွင်ဖော်ပြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုစာအုပ်နှင့်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဤစာအုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအရာများကိုဖတ်ပြီးပါကမျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်းသင်သိသည်။ သို့သော်နက်ရှိုင်းသောအနည်းငယ်ယူပါဘူး။ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ရတာလက်တွေ့ကျပြီးအပြုသဘောဆောင်တယ်။ ထိုအခါသင်သည်ပြင်ဆင်ထားပြီးမည်သည့်အဆင့်၌သင်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိသည်။
source link ကို entries တွေကို: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
Tags:: အကွာအဝေး, တစ်နှစ်ခွဲ, အခြေခံဝင်ငွေ, coronavirus, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ငွေကြေးဖောင်းပွမှု, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, ထား, Rutte, ထောက်ပံ့
23 မှမတ်လ 2020 10: 10
လူတိုင်း (ထင်ထင်ရှားရှား) ကမည်သူမျှမိမိတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်း (ကျွမ်းကျင်သူများဟုခေါ်သည့်) လူမှုရေးအကွာအဝေးအမိန့်များကိုလိုက်နာခြင်းမပြုကြောင်းသတိပေးသည့်လူမှုမီဒီယာများအပြင်၊ သတင်းစာသည်ယနေ့တွင်လည်းထပ်မံသတိပေးချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ခေါင်းအုံးနှင့်အေးစက်နေသောကြေးနန်းကျွမ်းကျင်သူ - မျက်မမြင်မျက်မမြင်” ။ မြို့တော်ဝန်များနှင့်သြဇာကြီးသူများကနယ်သာလန်နိုင်ငံသည် Big Brother ၏အမိန့်ကိုအကြီးအကျယ်လျစ်လျူရှုထားသည်ဟုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြသည်။
Corona ရှိခဲ့သူသို့မဟုတ်ရှိခဲ့ဖူးသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများပတ် ၀ န်းကျင် (ကျွန်ုပ်တို့၌သူငယ်ချင်းအမြောက်အမြားရှိသည်) မသိသော (ထူးဆန်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) အရာအားလုံးသည်သတင်းစာ Nieuwsuur, Youtube မှဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောလူအများအပြားတွင် Corona ရှိကြသည်မှာထူးဆန်းသည် (ဥပမာ၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ပုံကိုသြဇာမသက်ရောက်ပါ) ဗိုင်းရပ်စ်သည်အဓိကအားဖြင့်ကျော်ကြားသောလူများ (နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ အဆိုတော်များ၊ ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်များနှင့်ကျော်ကြားသူများကို) အဓိကအားဖြင့်မျက်စိရှိသည်ဟုထင်ရသည် အားကစားသမားများ) ။
ငါထင်တာက Corona ဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။ ငါခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟုထင်ရသည်၊
23 မှမတ်လ 2020 10: 40
မင်းမှာ NSB အဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်။ ငါတို့မှာ IMB အဖွဲ့ဝင်တွေရှိသလား။
23 မှမတ်လ 2020 11: 24
အကယ်၍ သင်အနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်သူတို့သည် NSB အဖွဲ့ဝင်များသာဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်နယ်သာလန်၌ထိုကဲ့သို့သောလူများအဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားရကြောင်းနှင့်ဤအစိုးရသည်ဤလူများကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရန်အဘယ်ကြောင့်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းရှင်းပြနိုင်ပြီးငွေကြေးနှင့်လည်းမတူပါ။
ဒတ်ခ်ျ (အားလုံးမဟုတ်ပါ) ဥပမာအားဖြင့်ဂျာမန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပြင်သစ်တို့ထက်များသောအားဖြင့်မနာလိုသောအစွဲအလမ်းများရှိသည်။ သူတို့သည်အခြားဒတ်ခ်ျလူတစ် ဦး အားမျက်စိဖြင့်အလင်းမပေးသောကြောင့်သင်၏နိုင်ငံသားများကိုသစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်၎င်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ င်ငွေအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်၊ IMB ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေစောင့်နေတဲ့စာရင်းရှိမယ်ထင်တယ်။
23 မှမတ်လ 2020 10: 18
အဝေးကလမ်းပေါ်မှာစုံတွဲတစ်တွဲကလက်ကိုကိုင်ပြီးခို၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတို့လိုတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နမ်းပြီး (ဘာမှမမှားပါ) နမ်းကြတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်ကစုံတွဲကိုကျော်သွားပြီးသူပြောတာကိုငါကြားလိုက်တယ်၊ မင်းဒါကိုရပ်တန့်သွားမှာလား၊ ကောင်လေးရဲ့ကောင်လေးအံ့အားသင့်သွားပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ သူမသည်အော်ဟစ်ကာ "သင်အရူးမဖြစ်သင့်ကြောင်းသင်သိ" ကောင်လေးက "အေးဆေးအေးဆေးအေးဆေးနေတာပေါ့၊ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိ" ထိုမိန်းမသည်ခြောကျခြားဖွစျလာသညျ၊ ကျိန်ဆဲလာသည်။ လက်မှဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်သည်၊ စုံတွဲသည်တိတ်တဆိတ်သူတို့၏လမ်းကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးမိန်းမသည်ရပ်တန့်လိုက်သည်။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနည်းငယ်အာရုံစိုက်ပါ
23 မှမတ်လ 2020 11: 16
Mister Smith သည်အကျိုးသက်ရောက်သော (သို့) မည်သူသိသနည်း။ ချိုသောအမျိုးသမီးသည်ခေတ်သစ် NSB အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် (inofficieller mitarbeiter တွင်အလုပ်လုပ်သည်) ။
23 မှမတ်လ 2020 11: 07
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏မြို့တော်တွင်ဘဏ်များပိတ်ပစ်သည် (စမ်းသပ်ခြင်း။ လူများမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုကြည့်ရန်)?
လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များ / လများအတွင်းလူအများလက်ခံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးမီများသောအားဖြင့် Hegelian စကားမျိုးစုံလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါမြင်သောအချို့သောအစီအမံများ (သူတို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုမသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည်ဟုသူတို့ထင်သည်) နှင့်သူတို့၏အကျိုးဆက်များ
၁) တစ်ရက်လျှင်တစ်ကဒ်လျှင်ကဒ်ပြားကန့်သတ်ချက် (ဥပမာ - ယူရို ၅၀) ။ (ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပရမ်းပတာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်လူများကိုငွေသားမရှိအောင်လုပ်ခြင်း)
၂) တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာအချိန်အနည်းငယ်သာဖွင့်လှစ်ထားသော ATM စက်များ (ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းနှင့်ငွေသားမရှိသောအခြေအနေတွင်အသုံးပြုခြင်း)
၃) မိတ်ဆက်ခြင်း (ယာယီသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယခုခေတ်တွင်အမြဲတမ်းအတွက်သတင်းစကားဖြစ်သည်) အခြေခံဝင်ငွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
၄) ယာယီအခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းမပြုမီအခြေခံ ၀ င်ငွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ဥပမာအားဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုရဆဲဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်သော ၀ င်ငွေရှိသူများ၊
၅) အကျပ်အတည်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဝင်ငွေကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုဤ Corona ဖောင်းပွမှုတွင်ဝင်ငွေကောင်းသောပုံစံကိုတီထွင်ရန်လုံလောက်သောစမတ်ကြောင့်စီးပွားရေးသမားများကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း။ (ဤအရာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လက်ဝဲယိမ်းထင်မြင်ချက်ဆိုဒ်များတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်)
၆။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအားနိုင်ငံပိုင်ပြုခြင်း။ (အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အခွန်များပြားလာခြင်း (ယာယီစည်းလုံးညီညွတ်မှုအခွန်ဟုခေါ်ဆိုခြင်း) ဖြင့်အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့ရသည်။ အကျပ်အတည်းကြားမှကောင်းသောငွေရှာနေသည့်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်၎င်းတို့အားလုံးဒေဝါလီခံကြသည်။
၇) နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုကြီးမားလာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ စတော့ဈေးကွက်သည်လုံးဝပြိုလဲသွားသည်။ စတော့အိတ်ချိန်းကုမ္ပဏီများသည်အစိုးရများ (ယာယီထင်သာမြင်သာရှိသည်) ကိုအစိုးရများကပိုင်ဆိုင်ပြီးအထက်တန်းလွှာများမှ (သူတို့လက်ထဲမရောက်လျှင်) ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
၈။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 8g လျင်မြန်စွာမိတ်ဆက်ပေးမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းရန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
23 မှမတ်လ 2020 12: 15
ပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်သောအခါ၊ ဤသည်အစိုးရကြွေးမြီလျှော့ချရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပင်စင်ရန်ပုံငွေများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ပြီးအစိုးရ၏ကြွေးမြီများ (ဂျီဒီပီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ချက်ချင်းကျဆင်းခဲ့သည့်ဟန်ဂေရီကဲ့သို့သောနိုင်ငံမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဤအကြောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အစိုးရကသူတို့၏အကြွေးအများစုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းထက်ဘဏ်များအတွက်ပိုကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘဏ်များအပေါင်ခံအကြွေးရှိသူများကိုဤနည်းဖြင့်သူတို့၏အကြွေးများကိုမဖယ်ရှားပေးလိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်များ၏မျက်နှာသာအတွက်လစဉ်ပေါင်နှံငွေပေးချေခြင်းမရှိသောကြောင့်အိမ်ခြံမြေသက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။
23 မှမတ်လ 2020 13: 33
ဘဏ်များကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းလျှင် (ABN AMRO ကိုကြည့်ပါ) ထို့နောက်နိုင်ငံတော်သည်ထိုအိမ်များကိုချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။
23 မှမတ်လ 2020 13: 07
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ကနယ်သာလန်စီးပွားရေးကိုစွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောထွက်ပြေးသွားသောအာဖဂန်နစ္စတန်သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကတရုတ်မှာသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ ထိုမိတ်ဆွေသည်မိသားစု (ဇနီးနှင့်ကလေး ၃ ယောက်) နှင့်ခွဲထားရန် ၂.၅ လကြာခဲ့သည်။ သူတို့ကပြည်နယ်ကနေဘောက်ချာတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်စု ၁ ယောက်ကိုနေ့စဉ်ဈေးဝယ်ခွင့်ပြုသည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုတွင်သတင်းပို့ရမည်။ တယ်လီဖုန်းနှင့်ဘောက်ချာဖြင့်တရားဝင်ခြင်း စူပါမားကက်ဖွင့်လှစ်အတွက်လှည့်ပေမယ့်များသောအားဖြင့် 2,5 ဖွင့်လှစ်။ သူ့အလုပ်ကဘာလဲ (စက်ချုပ်စက်ရုံမှာ) ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုလည်း "ဖြေရှင်း" ခဲ့သည်။ ငှားရမ်းခနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမပေးရတော့ပါ၊ စားနပ်ရိက္ခာဝယ်ယူရန်ပြည်နယ်မှလုပ်သားများကိုလုပ်ခပေးသည်။
1 = အဘယ်သူမျှမ
one = မရှိ
အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောမေးခွန်းများ၊ အထူးသဖြင့်နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များ / အမြင်များ၏လက်တွေ့ကျကျဖော်ပြရန်လိုအပ်သည့်မေးခွန်းများကိုမေးလျှင်၊ ရုပ်ပုံကြီးသည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရိုးသားမှုသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအတု ဟူ၍ ရှိမရှိပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းအားဖြင့်ကောက်ချက်ချရန်လွယ်ကူသလား
Attn zzpers သည်ဝင်ငွေတိုးရန်ယခုစာရင်းသွင်းသည်။ အဆိုပါပါ ၀ င်မှုအက်ဥပဒေသည်အတည်ဖြစ်သည်။ လျော်ကြေးကိုလက်ခံရန် = တစ်အလှူငွေပါစေ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုမရှိသောအလုပ်မရှိပါကအလုပ်ရှိသည်။ ဒါကလည်းဝင်ငွေမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကာလတွေကနေပဒေသရာဇ်စနစ်လား၊ အိတ်ဟောင်းတွေမှာဝိုင်အသစ်လား။
တရားဝင်အကူအညီရယူပါလား။ ဒါကလည်းအတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ subdistrict (အရပ်ဘက်) တရားရုံးများနောက်ထပ်အသိပေးစာသည်အထိပိတ်ထား။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တ ဦး တည်းဖြစ်ကြ၏, ငါ့ပျံ့ဖမ်း, ထစ်ထစ်မျက်တောင်ခတ်မျက်တောင်ခတ်မပြောပါ
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, နွေ ဦး ၏အထွတ်အထိပ်ရှိပါတယ်။ ငါတို့ကိုလည်းနှာခေါင်းကခေါ်ဆောင်သွားလို့ပဲ။ သဘာဝတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင် ၆ ပတ်ရှိနေသေးပြီးပြက္ခဒိန်သည် ၆ ပတ်နောက်ကျနေသည်။ Itsjing / jaap voigt အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အညီနေထိုင်ပါ
သဘာဝကိုလိုက်နာပါ၊ ... ကြားမှ - (ရပ်ကွက်အပေါ်) နှင့်အပြင်ဘက် (ရပ်ကွက်အပေါ်) ... ရပ်ကွက်။
အတွေးအခေါ်များပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ …။ “ အကူအညီ” ကိုသင်လိုချင်ပါက…
24 မှမတ်လ 2020 05: 36
မာတင် - .... ဒီပိုက်ဆံကဘယ်ကလဲ။ `
ဒါကြောင့်ပင်စင်အိုးတွေပိုပြည့်လာတယ် (သူတို့ကများစွာသောအရာတွေကိုပေးဆပ်နိုင်တယ်။ ) … .is
အခြားအရာလည်းရှိသေးသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ (!) လောက်ကအလွန်ကြီးမားသောကြွယ်ဝသောမိသားစုများ (illuminati, Rothschilds, Rockefellers စသည်ဖြင့်) စသည်တို့သည် ၂ 102၇ ထရီလီယမ်နှင့်ကွဲလွဲနေသည်ကိုလွန်ခဲ့သော (၁၀) ခန့်ကမှဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းတို့တွင်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု ၈ ၅ ၅ ထရီလီယံ (ထို့နောက်ခန့်မှန်းထားသည်၊ ယခုထက်ပိုပြီး) ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်စုစုပေါင်း ၂၀၀ ထရီလီယံကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ဟုသင်ထင်မြင်နိုင်သည်။ ငွေကွေးဘဏ်အဖြစ်ထရီလီယံ ၂၀၀ သည်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသောကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုလွှဲပြောင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ ဒီကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ငါဆက်ပြောသည်။ ထိုမိသားစုများအပြင်ဘက်ရှိလူများ၏စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာကမ္ဘာမြေအားထရီလီယံ ၄၀ သာရှိသည်ဟုငါဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်လူ ဦး ရေတစ်ဘီလျံမှာလူ ဦး ရေ ၇ ဘီလီယံဖြစ်သည့်အတွက်ထိုအလင်းရောင်သည်ငွေပမာဏ၏အဆ ၂၀ ထက်အဆရှိသည်။
200 trillion, မင်းကိုမင်း ၈၅၀ ထရီလီယံပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ 85020 trillion သည်သုည0နှင့်အတူ 200 ဖြစ်သည်၊ ထိုဆောင်းပါးတွင်ပင်ဤအိုးမှဤလွှဲပြောင်းမှုကာလ၌တစ်ခုသည်နိုင်ငံအားလုံးမှအစိုးရအားလုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးလိမ့်မည်ဟုလည်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါးတွင်အလေးပေးဖော်ပြထားသည်
`၀ ယ်ယူခြင်းအပေါ်` `မဟုတ်ပါ။ အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာဤအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သည်
« စုစုပေါင်း coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းလာသောအခါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်: စမ်းသပ်မှုပို့စ်များနှင့်စစ်တပ်
ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် 'ကွမ်တန်အစက်များ' သည်သင်၏ Coronavirus ရှိမရှိနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခံခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံသည့်ကြိုးမဲ့ ID ကတ်ပြား ' »
မာတင် Vrijland op Corona အကျပ်အတည်း - ဘယ်အချိန်ပြီးပြီးပြီလဲ၊ ငါတို့အခုဘာလုပ်သင့်လဲ။
ဂျိုရစ်မိုက်ကယ် op စုစုပေါင်း coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းလာသောအခါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်: စမ်းသပ်မှုပို့စ်များနှင့်စစ်တပ်
ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ထဲ op Corona အကျပ်အတည်း - ဘယ်အချိန်ပြီးပြီးပြီလဲ၊ ငါတို့အခုဘာလုပ်သင့်လဲ။